Muxuu yahay mowqifka Trump ee Niyuukleerka Iiraan? - BBC News Somali
12 Oktoobar 2017
Waxaa soo baxayo astaamo muujinaya in madaxweyne Trump uu diidi doono in uu ansixiyo heshiiskii quwadaha caalamka ay horaan la galeen dalka Iiraan ee ku saabsanaa barnaamijka niyuukleerka dalkaas.
Arrintan ayaa waxay mustaqbalka sababi kartaa in xaalad hor leh ay ka dhalato heshiiskaasi kal hore laga gaaray barnaamijka niyuukleerka Iiraan. Waxaa soo baxaya su'aalo ah sidee ayay Iiraan uga jawaabi doontaa tallaabada Trump.
Sidoo kale, haddii Trump uu tallaabadaasi ku dhaqaaqo waxaa soo bixi kara dhibaato dhanka dublamaasiyadda ah oo u dhaxeysa Mareykanka iyo waddamo badan oo reer Yurub ah oo aad u soo dhaweeyay heshiiska niyuukleerka ee Iiraan.
Heshiiskaasi oo dalka Iiraan ay la galeen wadammada shanta ah ee xubnaha joogtada ah ku leh golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey , Jarmalka iyo Midowga Yurub ayaa la saxiixay bartamihii sannadkii 2015. Ujeeddada heshiiskan ayaa ahaa in la xaqiijiyo in barnaamijka Niyuukleerka Iiraan uu gebi ahaanba noqdo mid nabdoon, waxa uuna rasmiyan dhaqan galay bishii Janaayo ee sannadkii 2016.
Iiraan ayaa hakisay qaar ka mid ah hawlaha barnaanijkeeda niyuukleerka iyada oo taa ku baddalaneysay in laga khafiifiyo qaar ka mid ah xayiraadaha dhaqaale ee saarnaa.
Haddaba waxaa jiray dhowr qodob oo muhiim ah oo lagu xusuusan karo heshiiskaasi.
In Iiraan lagu khasbo in gebi ahaanbo ay hakiso barnaamijkeeda Niyuukeleerka ma ahayn arrin suurtagalnimadeedu ay muuqato balse in laga shaqeeyo arrintaasi ayay ahayd mid macquul ah.
Xilligii heshiiskaasi la galayay waxaa jiray walaac dhab ah oo ah haddii aan heshiiskaasi la gaari lahayn in uu dhici lahaa dagaal oo xal milatari wax lagu raadin lahaa.
Israa'iil ayaa dooneysay in Iiraan laga qaado tallaabo milatari. Sidoo kale waddammada carbeed ee ku yaala khaliijka ee cadaawadda kala dhaxeyso Iiraan ayaa tallaabadaasi si hoose ugu ololeynayay.
Sidoo kale waxaa su'aal la iska weydiinayay suurtagalnimada in Mareykanka uu kaligii adeegsado awood milatari si uu uga hortago barnaamijka Niyuukleerka Iiraan. Haseyeeshee ujeeddada waddamada heshiiska la galay Iiraan ayaa ahayd in laga baaqsado colaad.
Dowladda Iiraan ayaa ku hawlan arrimo badan oo Mareykanka iyo waddammada ay xulufada la tahay ee reer Yurub iyo kuwa bariga dhexe ay u arkaan in ay halis ku yihiin amniga gobolka.
Dhammaan waddammadani heshiiska la galay Iiraan iyo hay'adda Qaramada Midoobey u qaabilsan niyuukleerka iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiin sarsare oo ku jira maamulka madaxweyne Trump ayaa waxay rumeysan yihiin in Iiraan ay si wanaagsan u dhaqan gelisay heshiiskaasi.
Inkastoo mar kastaa uu dhaliilayay heshiiskaasi ayaa madaxweyne Trump waxa uu isaga oo ka caga jiidaya uu dib u ansixiyay heshiiskaasi balse hadda waxa uu u muuqdaa mid arrintaasi ka noqday.
Laakiin waxaa xusid mudan in ay aad u kala geddisan yihiin heshiiskaasi Iiraan iyo xeerka dib u eegista heshiiska Iiraan ee Mareykanka.
In Trump uusan ansixin heshiiskaasi ayaa ka dhigan in uu furo dood hor leh oo u sahleysa aqalka Koongareeska in uu joojiyo in Mareykanka uu u hoggaansamo heshiiskaasi.
Soo celinta xayiraadaha
Balse dhab ahaantii heshiiskaasi ayaa ahaa mid caalami ah oo la wada dhaqangeliyay, waana mid sii jiri doono xitaa haddii Trump uu qaadaco.
Haddii uu ansixin waayo heshiiskaasi, Trump waxaa u fududaaneysa in uu xayiraadihii laga khafiifiyay Iiraan dib ugu soo rogo, taa oo ka dhigan in Mareykanku uusan marnaba dooneyn heshiiskaasi.
Waxaa dhici kara in arrintan la hor dhigo aqalka Koongareeska si uu go'aan uga gaaro. Inkastoo aragti ahaan arrintan aad loogu kala qeybsan yahay, haddana ma jiro wax asxaan ah oo Tehraan loo hayo balse ma cadda tallaabada xigta ee uu qaadi doono Kongareeska Mareykanka.
Halis dhanka gobolka ah
Iiraan ayay waddammada reer Galbeedka iyo xulufadooda waxay u arkaan in ay dhibaato ku tahay gobolka oo dhan.
Waxaase la yaab leh in Mareykanku uu Iiraan gaarsiiyay in ay door muhiim ah ku yeelato siyaasadda gobolka kaddib markii uu burburiyay awooddii dowladda Saadaam Xuseen ee dalka Ciraaq.
Iiraan ayaa hadda galangal siyaasadeed oo muhiim ah ku leh dowladda Shiicada u badan ee dalka Ciraaq. Iyada iyo maleeshiyada ay gacansaarka leeyihiin ayaa sidoo kale waxa ay door muhiim ah ku leeyihiin dalka Suuriya. Waxay sidoo kale ku lug leedahay colaadda dalka Yaman inkastoo dood badani ka taagan tahay heerka uu gaarsiisan yahay ku lug lahaanshahaasi.
Waxyaabahaasi oo dhan waxaa ka sii daran barnaamijkeeda gantaallda iyo eedeynta ah in ay taageerto argagixisada, waxaana jira sababo macquul ah oo looga walaaco saameynta Iiraan ay ku yeelaneyso gobolka.
Heshiiska Iiraan ay la galeen quwadaha caalamka marnaba ma uusan baddalin hab-dhaqankeeda guud.
Hawlaha ciiddammada ilaalada qaranka ee Iiraan iyo dedaallada cilmibaarista ee arrimaha gantaalada ayaa halkoodi ka sii socda.
Heshiiska lala galayna marnaba meelna kama khuseyn arrimahaasi. Balse Trump ayaa u muuqda inuu ku eedeeyo Iiraan in gebi ahaanba aysan si niyad wanaag ah u gudan waajibaadkeeda ku aadan heshiiskaasi, wuxuuna doonayaa in uu tallaabo adag ka qaado xukuumadda Tehraan.
Haddii xayiraado hor leh lagu soo rogo Iiraan, arrintaasi ma noqon doonto mid u daran Iiraan oo kaliya ee waxay dhibaato ku tahay Mareykanka iyo xulufadiisa doonaya in ay xiriir ganacsi oo furan la yeeshaan Tehraan.
Haddii Trump uu ka dhabeeyo go'aankiisa oo uu heshiiskaasi ansixin waayo, taa kama dhigna in heshiiskaasi uu burburay.
Xulufada Mareykanka ayaa ku dhiirigelinaya aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo iyo aqalka Kongareeskuba in la tixgeliyo heshiiskaasi oo aan laga laaban.
In Trump uu heshiiskaasi ka baxo waxbo uma dhimeyso Iiraan, waayo waxay wali sii wadi doontaa in ay ixtiraamto heshiiskaasi ay la gashay quwadaha caalamiga ah. Waxaase laga yaabaa in arrintaasi ay aad u kala qeybiso Mareykanka iyo reer Yurub. Balse mustaqbalka heshiiskaasi niyuukleerka ayaa waxa uu ku xiran yahay jawaabta ay Tehraan ka bixiso tallaabo kaste oo uu Mareykanka qaado.
Waxaana xusid mudan in maamulka madaxweyne Trump ay ka buuxaan shakhsiyaad milatari ahaan jiray oo laga yaabo intooda badan in ay ka soo horjeedeen xoogagga ay Iiraan taageerto ee dagaalka ku jira.
Intooda badan ayaa laga yaabaa in ay taageeraan heshiiska niyuukleerka laga gaaray balse waxay sidoo kale doonayaan in ay arkaan Iiraan oo lagula xisaabtamay ficilladeeda.